Civil 3D, yenza ulungelelwaniso (isifundo 3) -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-3D yabasebenzi, yenza ukulungelelaniswa (isifundo se-3)
Kwizifundo ezimbini zangaphambili esizibonayo indlela yokungenisa iimpawu y ngokwezifiso. Ngoku sifuna ukwenza ulungelelwaniso kumanqaku aphawulwe njengezitishi.
Yakha i polyline
Ngenxa yoko, sisebenzisa umyalelo we-polyline kwaye sisebenzisa umyalelo we-snap kwiindawo. Siya kwisikhululo sokuqala ukuya kwesokugqibela.
Ngenxa yoko sithetha "ukulungelelaniswa / ukulungelelaniswa kwintlanzi"
emva koko sichukumisa i-polyline kwaye iphaneli iphakanyisiwe ukuba okwangoku asihoyi nganto kunokubiza ulungelelwaniso. Siya kuyibiza ngokuba "nguCalle Mel Zelaya"
Kwaye nabahlobo bam banalo.
O, ufuna ukudala umphezulu?
Inkinobho yokunene ebusweni, emitsha kwaye inokuyibiza ngokuba "I-Hugo Chávez"
Ngoku ke nqakraza ngakwesokudla kwi "inkcazo / iindidi zamaqela" kwaye siyanitshela ukuba zonke ezo ngongoma zizo ezenza phezulu.
Ewe, siyaqhubeka emva kokuba ndididekile. Zama okwangoku ukwenza iiprofayili kulungelelwaniso nakumphezulu owenziweyo.
Jorge Casteleiro uthi:
Bahlobo bahlobo unganditsho ukuba ungenze njani iprofayili ende engqinelana nokulungelelaniswa kwakho
Ukumisa i-ramirez uthi:
Ndifuna ukwenza ulungelelwano (hlalani i-polylinea kwi-autocad 2014
Ngaba ufumene indlela?
alex ventura uthi:
ulungelelwano luphuma kwiintshi, njengoko ndenzayo kumamitha okanye kunoko umgama wam wangempela
Ndingathanda ukuba undincede ukuguqula ulungelelwaniso lube yipolline ye-3d …… Civil 3d iyandibetha …… ..
Ndiyabulela ngubani onokumxhasa kule ngxaki.
Abahlobo bam boncedo siyabonga ngale ngxube enomdla kakhulu iya phambili iyavuyisana, qaphela, ukuba icandelo lendlela lide kangakanani ndiyakwazi ukucwangcisa la macandelo
Xa udala ukulungelelaniswa, umzekelo, yakha ukusuka kwi-polyline, kwaye ufumana ipaneli yokunika izakhiwo, ibhokisi lesithathu elibizwa ngokuthi
"isikhululo sokuqala" ikuvumela ukuba usete indawo yokuqala
Molo, unjani? Super ...
Ngokuqala ndonwaba ukubona le ndawo ..
Oku kunomdla kakhulu… ..
Ndinombuzo ... nditshintsha njani i-mileage endiyifunayo ngale ndlela
0 + 123.25…. Kodwa ndibonakala ngale ndlela 1 + 23.25 kwaye andifumananga ndlela yokulungisa… undixelele… undibulisele, iintsikelelo….
I-1ra ixesha ndibona indawo endiyifumana ngayo into endiyithandayo xa beqhubeka kodwa ,,
Ndiyathanda ukuba ndibe nohambo oluncinane, kwaye ambalwa amakhwenkwe am imisebenzi.
Kodwa siya kubona.
Izibingelelo zabangani be-geofumadas, izihloko zabo zithandeka kakhulu, zinokundinceda ukuba ndenze izigaba eziphambeneyo kunye nokubala kwemilinganiselo, uze udale amashidi eeprojekthi kunye neendawo ezibonakalayo zeeprojekthi kwimihlaba, indawo yemvelo, ukuphakama ukuphakama, ukuphakama ukuzalisa nokugqithisa.
Ndiyathemba ukuba unokunceda, ndiyabulela kakhulu
Molo Alfonso, umxholo onomdla, bendifuna ukuthetha ngawo. Ndizothatha ithutyana, xa ndibuya kuhambo lwam ... ndiyathemba ukuba akukashiywa lixesha.
Molweni zihlobo zegeofumadas…. Ngumnikelo obalaseleyo kuwe ovela kule nkqubo kwaye ubanzi kwaye ubanzi njenge-3d yoluntu…. Ndiyinjineli yoluntu kwaye ndingathanda ukuba undincede ngombandela othile njengokubala ivolume phakathi kweendawo ezimbini kodwa zilinganiselwe ngoxande ... Oko kukuthi, kwicandelo lomhlaba ... ngamacandelo apho ungabona khona imigca echaza umhlaba wendalo kunye nomgca apho usiko lufikelele khona…. Enkosi kwangaphambili kwaye ndikhangele phambili kwimpendulo yakho kungekudala… ..
Qhubeka njalo… .. Ndiyabulisa